၆ အလေ့အကျင့် (သွယ်ဝိုက်) ကသင့်ကို Porn - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်ကိုဖြတ်ရန်ကူညီပေးသည်
Will (သွယ်ဝိုက်) သငျ Porn Quit ကိုကူညီပါဒါက6အလေ့အထများ
ကျွန်မအကြိမ်ပေါင်းများစွာမေးမွနျးခဲ့ပြီးပြီ: "သင်ဘယ်လိုကောငျးကြိုးအတှကျ porn အရှုံးမပေးခဲ့ဘူး, သင်သိ relapsing မပါဘဲ?" ငါ့အဖြေကို? ဒါဟာသင်နေ့စဉ်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ရုံမဆိုစွဲနှင့်ဝသကဲ့သို့, ထိုရွေးချယ်မှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုမိုလွယ်ကူလာပေခြင်းနှင့်သင်သင်ကမှတဆင့်ရကူညီနှငျ့သငျအောင်နေရှေးခယျြမှုပိုမိုဆက်ကပ်အပ်နှံကြလိမ့်မည်လုပျနိုငျမှုအရာတို့ကိုနံပါတ်ရှိပါသည်။
ဒီနေရာတွင်သွယ်ဝိုက်သင် rewire ကူညီခြင်းနှင့် reboot ပြန်ထားတဲ့ All-စားသုံး PMO အလေ့အထမှသင်၏အသက်တာကိုယူပြီးမစတင်လိမ့်မည်ဟုနေ့တိုင်းလုပျနိုငျသညျ့အကငျြ့မြား၏စာရငျးဖွစျသညျ။
1 ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း
ငါတို့ရှိသမျှသည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ, မဟာအကျိုးကျေးဇူးများကိုသိနိုင်အောင်ဒီတစ်ခုဟုမပါဘဲတတ်၏။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျသဆောင်းပါးသင်တို့သည်ဤမျှဟုပြောသည်ပြန်ဖွင့်အပေါ်ကိုဖတ်ရှုကြောင့်, သင်ဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိသည်ကြောင့်ပဲလေ့ကျင့်ခန်းများအကြားတစ်ဦးကွာခြားမှုရှိတယ်သင်တို့အထဲကထောက်ပြချင်တယ်။ (တစ်ဦးအကြီးအဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရဲ့သော်လည်း!) ဒီမှာရည်မှန်းချက်ကိုတက်ရိုက်ကူးဖို့, ဒါမှမဟုတ်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြည့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး, ဒီမှာရည်မှန်းချက်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးခံစားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တဖန်ပျော်ရွှင်ကျန်းမာရန်သင့်လမ်းကိုလေ့ကျင့်။ ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, ပြင်ပမှာဆိုတော့တစ်လမ်းအဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုသုံးခြင်းနှင့်ပင်အဖြစ် အစားထိုးအလေ့အထ။ သင်သည်ထိုညစ်ညမ်းဆီသို့ဆွဲယူခံစားမိသည့်အခါတိုင်းနှင့်, မြေနှိပ်ခြင်းနှင့် 30 pushups လုပ်နေတာအားဖြင့်ဖူးအငုံထွက်အတွက် PMO ၏တညဉ့် nip ။
အဆောက်အဦးအပြင်လေ့ကျင့်ခန်းကို restart အဘို့အလွန်ကောင်းနေတယ်။ လူတွေကိုရန်သင့်အားဆက်သွယ်နှင့်သင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကူညီပေးပါမည်သည့်ပြင်ပအသင်းအားကစားတက်ယူစောစောအိပ်ရာထဲကရတဲ့ပြီးနောက်ရွရွပြေး Go, သို့မဟုတ်သင်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်တစ်ခုလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ရ - တဲ့မာရသွန်လိုပဲ။
2 ။ အစောပိုင်း riser ဖြစ်လာခြင်းနဲ့ productivity ပူးတွဲတင်ပြထား:
တစ်နေရာရာကိုငါ့ reboot အလယ်၌ငါအလွန်အစွမ်းထက်သင်ခန်းစာသဘောပေါက် - ကကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုလည်းရှေးခယျြမှုကြောင်းနိဂုံးဆီသို့သွားခြင်းငှါအကြှနျုပျကိုရက်ပေါင်းများစွာယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာတန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်ခြင်းမဟုတ်လွန်းတဲ့ရှေးခယျြမှုကြောင်း, ထို့နောက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ဆိုလိုတာပါ။ သငျသညျ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုလုံးဝရေတွင်းတစ်တွင်း-performing နှင့်တန်ဖိုးရှိရှိလူ့ဖြစ်လျက်ရှိဖြစ်ရန်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတှနျးလှနျသျောလညျးသငျကြောင်းခုခံ၏အားလုံးမှတဆင့်တွန်းအားပေးနိုင်လျှင်သင်အဆင့်ကိုခေါင်းနှစ်လုံးနှင့်အတူဆုခခြံနေကြတယ်, ငါ့ကိုယုံကြည်စေခြင်းငှါ, သင့်ကိုအကောင်းဆုံးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမခံစားရစေခြင်းငှါ နှင့်တိကျစွာသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်အရာ၏အမျိုးအရာစုံစုံစဉ်းစားတွေးခေါ်။
productivity မဟုတ်ဘဲကစာရင်းပယ်ဦးချင်းစီတာဝန် ticking, ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်စီမံကိန်းကိုဖြစ်စေသောအောင်မြင်မှု၏အံ့သြဖွယ်အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းကိုင့်အလုပ်များစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ဘူး။ သင်ကညာဘက်ကိုပြုမိတဲ့အတွက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် သိ. အများနှင့်ကောင်းစွာကြောင့်လုပ်နေတာဒီမှာသော့ချက်ဖြစ်သည်။
Rising အစောပိုင်း re-align လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့ဦးစားပေးဘို့အအံ့ဘွယ်သောအမှုမနှင့်ဤသွယ်ဝိုက် PMO ဒါအထောက်အကူကြောင်းကိုထိုညဉ့်-ဇီးကွက်ဘဝပုံစံကိုချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားတဲ့အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ သငျသညျနေ့တိုင်းအနည်းငယ်ပိုပြီးနာရီအသုံးချနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏ဆက်ပြောသည်အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်။ သင်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဆိုရင်သင်မတိုင်မီလုပ်ခဲ့တယ်ထက်သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုခံစားဖို့ပိုအချိန်နှင့်စွမ်းအင်များတွေ့ပါလိမ့်မည်။
3 ။ ပဲ့ထိန်းအပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်း
သင်ကသင့်ရဲ့ PMO အလေ့အထ, အလုပ်မှာသင်တို့ဆီသို့လာပြီစေခြင်းငှါအရာတစ်ခုခု, ဒါမှမဟုတ်ယေဘုယျဘဝစိတ်ဖိစီးမှုကနေအဓိကအားထားရှိမရှိတစ်ခုခုလောက်စိုးရိမ်ခံစားနေပါကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း (သို့မဟုတ်ထွက်ပြေးလာသူ) ၏နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေ porn မှဖွင့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည့်အနေဖြင့် ပြဿနာ။ အပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အများစုမှာပဲ့ထိန်းအပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်းကသင်၏ကြွက်သားစာချုပ်ချုပ်နှင့်ဖြန့်ချိစဉ်နက်ရှိုင်းသော, နှေးကွေးနေအသက်ရှူအာရုံစိုက်, သင်အိပ် (သို့မဟုတ်အငြိမ့်ထိုင်ခြင်းနှင့်လျောင်းတော်မူ) ရှိသည်။ ဤသည်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုမ:
1 ။ ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှု, အောက်ပိုင်းသွေးဖိအားကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်နိမ့်ယေဘုယျစိုးရိမ်သောကကိုကူညီနိုငျသောဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်ရှုရန်သင့်အားသွန်သင်။
2 ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေအတွက်တက် built ရရှိသောတင်းမာမှုဖြန့်ချိ, သင်ကသင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေအမှန်တကယ်ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ဘို့များကဲ့သို့ခံစားရသောအရာကိုသင်ပေးတယ်။ သင်သည်သင်၏ကြွက်သားတင်းမာမှုသိုလှောင်ကြသောအခါတစ်အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတာနဲ့သင်ကတင်းမာနေအထိ စတင်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမီလိုက်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်တင်းမာမှုအသိအမြင်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝများတွင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုအနိုင်ယူဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
4 ။ သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း
အနားယူရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်သည့်အပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်းဆင်တူ, ဘာဝနာစာသားသင့်ဦးနှောက်ယခုအချိန်တွင်အတွက်ဖြစ်လေ့နှင့်သင့် willpower တည်ဆောက်။
တှေးတောဆငျခွ စိတ်ညစ်စရာအချိန်ပမာဏ, သို့မဟုတ်စွမ်းအင်လိုအပ်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် willpower တိုးမြှင့်၏ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး။ သင်အမှန်တကယ်ကြောင်းအလေ့အထကန်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်သို့သော်များစွာသော willpower လိုအပ်ပါဘူး။ အစအဦး၌အဖွင့်သုံးမိနစ်တစ်ရက်နှင့်အတူစတင်ခြင်းပြီးသားအပြုသဘောရလာဒ်များပူဇော်ပါလိမ့်မယ်သင်ကသန့်စင်သောမိဿဟာယနေ့ကသုံးမိနစ်ကိုငါပေးမည်။
ရုံမကြာသေးမီကငါထိရောက်သောဘာဝနာအစွန်အဖျားပေးထားသောကြောင့်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုလှည့်လည်ခွင့်ပါဝငျခဲ့သညျ။ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာတရားအားထုတ်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောအတှေးအထွက်ကိုစောင့်ရှောက်အကြောင်းကိုကြောင်းထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သောနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပေမယ်သင်အလုပ်များရထားဆိပ်ကမ်းသွားလာရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ပါဘူးလျှင်သင်သည်သင်၏ destination သို့ရောက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တှေးတောဆငျခွဆင်တူသည်။ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်အဘို့, သင့်စိတ်ထဲကိုသင်ပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးများကိုအပေါ်စည်းကြပ်ထိန်းချုပ်မှုများကိုယ့်ကိုကိုယ်လွတ်ရန်သေချာစေပါရန်ခွင့်ပြုသည်။ စဉျးစားကွညျ့။ သငျသညျစဉ်းစားခြင်းနှင့်သင်မည်သို့ရှိတက်အဆုံးသတ်နေအရာကိုမှတ်စုကို ယူ. , ညင်ညင်သာသာပြန်ယခုအချိန်တွင်နှင့်သင့်အသက်ရှူဖို့သင့်အာရုံဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဤ "စိတ်ကိုအေးဆေး" လူအပေါင်းတို့သည်အကြောင်းကိုဖြစ်ပြီး, နောက်ဆုံးမှာသင်ပိုမိုငြိမ်းချမ်းရေးမှာခံစားရပါလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။ သင်ဤငြိမ်းချမ်းရေးကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ, သင်တကာသင်တို့၏အကြံအစည်လမ်းညွှန်ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။
5 ။ တစ်ဂျာနယ်ရေးရန်
ပြန်လည်နာလန်ထူရန်သင့်လမ်းကြောင်းကို Diarizing အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကုထုံးနိုင်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုများစွာသောကွာဆိုသောစကားကို "ဂျာနယ်" နှင့် "ကုထုံး" နှစ်ဦးစလုံးထံမှရှက်လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုမိမိတို့အဘို့စကားမပြောတတ်နဲ့ကျွန်မကအနည်းဆုံးတစ်ဦးပါပေးရန်သင့်အားတိုက်တွန်းကြသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စွဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသို့သငျသညျအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ခွင့်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုခြေရာခံရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ tool တစ်ခုပါ။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်သင်ရှာတွေ့ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းကိုသင်၏အရေးအသားအတွက်သဲလွန်စရှာတွေ့ဖွယ်ရှိနေ သင့်ရဲ့ PMO အလေ့အထ၏အမြစ်.
သငျသညျစာစီစာကုံးရေးရန်မလိုပါ, သင်ပင်ကောင်းသောစာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါရှိသည်ဖို့မလိုပါ။ တချို့ကရက်ပေါင်းသင်ရုံသင်တစ်ဦး Mini-ဝတ္ထုကိုရေးပါမယ်အခြားသူတွေအပေါ်, ရက်စွဲရေးထားပေမည်။
ကောင်းသောအဟောင်းများကိုကလောင်နဲ့စက္ကူကိုသင်လျင်မြန်စွာa"ကိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ" လှုပ်ရှားမှုသို့ပြောင်းရန်မှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေမယ့်အခြေအနေမျိုးအတွက်, လုံခြုံတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
6 ။ ပြင်ပမှာအချိန်ဖြုန်း
တောင်မှလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာဘဲ, ကိုယ့်အိမ်ပြင်ဖြစ်ခြင်းနေဆဲကို restart နှင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲမှပြန်လည်ထူထောင်ဘို့ကြီးမားတန်ဖိုးကိုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေ, နေရောင်ခြည်နှင့်အာကာသအားလုံးသင့်ရဲ့သုခချမ်းသာမှုအတွက်အံ့ဘွယ်သောအမှုလုပ်ပါ။ အတွေ့အကြုံမှအိမ်ပြင်နှင့်ပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းရှာဖွေရေးနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားပေးစဉ်စွဲ, ကိုယျ့ကိုယျကိုရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ခွဲထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရုတ်တရက်ကျွန်တော်, (အထွေထွေသဘောအရ) ရည်မှန်းချက်ကြီးဖြစ်လာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေဆက်သွယ်မှုဖန်တီးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုအပေါ်အားကိုးပါတယ်။
အားလုံးအထက်သို့သျောငါသည်လက်ျာလမ်းစဉ်ကိုသငျသညျခထြားနှငျ့သငျ rewire, ကောငျးကြိုးအတှကျကူညီပေးပါမည်သောတစ်ခုတည်းသောအရေးအပါဆုံးအလေ့အကျင့်လေ့ကျင့်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း, ရွေးချယ်ဖို့ရှေးခယျြထားပါ။
သင်၏ porn စွဲလမ်းမှုသည်ကြင်နာမှုကင်းမဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသင့်ကိုတစ်ရက်နားခွင့်မပေးပါ တစ်ခါတစ်ရံမှာသင်စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာသင့်ကိုကန်ပါလိမ့်မယ်။ မြဲမြံစွာရပ်တည်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏“ အလုံအလောက်! မင်းငါ့ကိုဒီအချိန်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခါလာမပေးတော့ဘူး၊
အခြားသတင်းများ NEWS: reboot အောင်မြင်မှုပုံပြင်များများအတွက်ပြိုင်ပွဲ၌ကျန်ကြွင်းပိုပြီးရုံရက်အနည်းငယ်။ ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်အင်ဖို: ပြိုင်ပွဲ